Ị nwere ike ịgwa m otu esi enweta backlinks maka ebe nrụọrụ weebụ ọhụrụ m?
Tupu igosi gị otu esi enweta backlinks maka ebe nrụọrụ weebụ ọhụrụ gị, ka anyị jiri obere ntakịrị iwepụ. Kedu ezigbo uru nke backlink maka SEO? M na-ekwu na ọ bụrụhaala na Google search engine na-eji weebụ na blọọgụ mee ihe, njikwa backlinks maka SEO aghọwo ezigbo ahịa. Ma ihe kachasị anya na nchọta search engine nke ụwa amanyewo ndị niile na-ere ahịa na-aga n'okpuruala. Ntak-a? Nanị n'ihi na ugbu a, ịzụta njikọ iji melite njirimara ọchụchọ nke ebe nrụọrụ weebụ gị ma ọ bụ blog adịghịzi amata na ọ bụ na Google na Google Webmaster Guidelines.
Ụzọ ahụ, ka m gosi gị ụfọdụ nọmba oyi m nwere mgbe m ruru ihe dịka blọọgụ 250 na netwọk n'ịntanetị banyere ụlọ njikọ ụgwọ. Ya mere, tupu ị eche echiche banyere esi enwetaghachi backlinks, a na-atụ aro ka ị tụlee ma ọ dịkarịa ala ndị na-esonụ - sites hospedagem gratis. Nke a bụ ndepụta dị mkpirikpi nke ihe m chọpụtara:
Nlekọta backlinks nke kachasị elu site na PR1-2 na ebe nrụọrụ weebụ na blọọgụ na-erekarị maka $ 30 na gburugburu $ 120 kwa ọnwa. Ime otú ahụ, o yikarịrị ka ị ga-enweta njikọ site na mpaghara na azụ. Ma, ihe bụ na ụdị backlinks ugbu a bụ Google na-aghọta ugbu a dịka atụmatụ doro anya nke njikọ njikọ, ya mere, mgbe ụfọdụ, ị na-etinye maka ntaramahụhụ siri ike.
Ụlọ ọrụ azụmahịa kachasị ahịa na ahịa asọmpi nke PBN (netwọk na nzuzo) na-ere njikọ maka ndị dị ka ndị a: Traveling, Fitness, Fashion, Finance, and Marketing. O yikarịrị ka ị ga-azụta akara azụ arịlịka arịlịka na-esiteghị na nke ị họọrọ n'ebe ahụ. Ma ego enweghị ọnụahịa, dị ka ịnye ọnụ, ọ na-adabere mgbe niile na ọnụọgụ nke njikọ njikọ.
Nke a bụ otú m si kwadebere ịzụta backlinks maka ebe nrụọrụ weebụ m - naanị lee anya na mkpokọta m niile natara site na nchịkọta blọọgụ abụọ ahụ na netwọk weebụ a rịọrọ. Ihe dị ka mmadụ iri ise n'ime ha kwetara na ha nwere akara azụ azụ maka ire ere. 20 siri ọnwụ na ha enweghị ụgwọ nkwado azụmaahịa na anaghị eme ụdị ọrụ a ma ọlị. Ndị fọdụrụ n'ime ha enweghịkwa azịza ọ bụla.
N'ikpeazụ, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọkara nke ebe nrụọrụ weebụ 50 na blọọgụ ndị ahụ gosipụtara na ha nwere SEO backlinks maka ire ere kwetara ka ha nwee ezigbo ihe gbasara m.
Ọfọn, dị ka ị pụrụ ịhụ - nsogbu ahụ n'onwe ya na esi nweta backlinks bụ n'ezie site na ajụjụ ahụ. Echere m na ọ bụ onye na-enweghị atụ na ị nwere ike ịzụta azụmaahịa maka ebe nrụọrụ weebụ ọhụrụ gị, na-enye gị na ị ghọtara ihe ize ndụ niile nwere ike ịdakwasị onwe gị ụgwọ ọrụ maka nke ahụ. Ya mere, ọ bụrụ na ịchọrọ ịgba chaa chaa, lee otú ị ga-esi nweta backlinks ụzọ kachasị mma. Tụlee atụmatụ ndị a mbụ:
Nchịkọta ndị ọbịa - inweta akwụkwọ ndị ọbịa ma ọ bụ isiokwu na ụfọdụ ndị na-ede blọgụ nwere ike ịbụ ụzọ kasị mma ịzụ njikọ maka weebụsaịtị ma ọ bụ blog ọhụrụ.
Nkwado nkwado - dịka ịde blọgụ ọbịa, ịkwado ụfọdụ nkwado site na ụlọ ọrụ na-ahụ maka ụlọ ọrụ ma ọ bụ niche ma ọ bụ onye nchịkọta blog (admin) nwekwara ike inye gị njikọ dị mma na nloghachi.
Nkọwaahịa - nkọwa onwe gị, dịka nanị ihe ịma aka ị ga-ezute na-eme ka ị mara ihe enyemaka nke ndị ọzọ na-adabara na niche gị ma ọ bụ mkparịta ụka.